Idizayini Yokukhiqiza - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Idizayini yokukhiqiza (i-DFM) inqubo yokwenza umkhiqizo ube lula futhi ungabizi kakhulu ukuwenza. Onjiniyela beFumax Tech banolwazi lweminyaka eminingi ngamasu ahlukahlukene e-DFM. Lokhu okuhlangenwe nakho kwe-DFM kuzosetshenziselwa ukunciphisa izindleko nokuqeda izinkinga ezihambisana nokukhiqizwa komkhiqizo wakho.
Onjiniyela beFumax bajwayelene kakhulu nezinqubo ezahlukahlukene zokukhiqiza, onjiniyela beFumax bahlala njengamanje kubuchwepheshe bamuva bokukhiqiza, ngakho-ke lobu buchwepheshe bungasetshenziswa ukukhiqiza umklamo omuhle kakhulu womkhiqizo. Ulwazi lwabo lokukhiqiza lusetshenziswa kuzona zonke izinyathelo zenqubo yokuklama ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo wokugcina ulula ukuhlangana ngenkathi usahlangabezana nazo zonke izidingo zomkhiqizo.
Izinto ezinhle mayelana ne-deisgn ne-Fumax:
1. IFumax iyimboni. Siyayazi yonke inqubo yokukhiqiza. Umklami wethu unolwazi olujulile lwazo zonke izinqubo zokwenziwa. Ngakho-ke abaklami bethu bazogcina engqondweni ngesikhathi senqubo yabo yokwenziwa kokukhiqizwa okulula ngokwesibonelo, inqubo ye-SMT, ukukhiqizwa okusheshayo, ukugwema ngezingxenye zemigodi, sebenzisa izingxenye eziningi ze-SMT ukuze kusebenze kahle.
2. AbakwaFumax bathenga izingxenye eziyizigidi. Ngakho-ke, sinobudlelwano obuhle kakhulu nabo bonke abahlinzeki bezinto. Singakhetha izingxenye ezisezingeni eliphakeme kodwa ngentengo ephansi. Lokhu kuzonikeza ukuncintisana kwezindleko ezinkulu kumakhasimende ethu.